Fanaladiana - Instant Malagasy
"Tsy toy ny lamban'angidina akory ny ahy ny adidy; ka sady tsy itafia-maty no tsy irakofam-belona...
Fitsapana alahelo, famangiana manjo ireo no hevitra taratra ao anatin'izany hoe fanaladiana izany. Ny rakibolana dia manambara fa fialan-tsiny izy io ka nalaina avy amin'ny fototeny hoe halady.
Eto anefa dia misy foto-kevitra mahalasa fisainana raha tsy hoe mampizara ny hevitra. Tsy inona izany fa ny fampiasana ny teny hoe: fitsapana alahelo. Fahiny tokoa mantsy dia tsy mba avy hatrany dia midodododo miaraka amin'ny vola anaty valopy ny mpamangy na mitondra lamba, fa tonga kosa satria tsitafandrimandry noho ny fahoriana mianjady ka tsy nahavimbina na inona na inona. Io fahatongavana tsy mitondra na inona na inona io no ambara amin'ny hoe "fitsapana alahelo".
Nosoratana na nampahafantarina ny fianakaviana kosa anefa ny fotoana sy ny toerana ahafahan'ny rehetra manao ny famangiana rehefa voalevina ny razana. Ka eo izany vao manolotra izay voaomany ny tsirairay na ny isan-tokonana.
Ankehitriny, toy ny hita tao amin'ny kabary am-pandevenana dia efa niova sy naka endrika somary tsotsotra kokoa ny fombafomba amin'ny fanaladiana. Ireto ny fiovana hita sy tsapa:
Tsy misy intsony ny mitomany* fa fampafantarana amin'ny alàlan'ny taratasy filazana manjo no miantso ny olona hiara-miory.
Tsy ny iray tanàna intsony no mifanampy amin'ny tsaka rano, toto-vary, fampiriman-trano, fividianana tsihy sns (indrindra moa fa eto an-tanàn-dehibe) fa efa ireo fianakaviana idonam-pahoriana no tena miantsoroka an'ireo.
Foana ny fitsapana alahelo fa famangiana manjo no matetika fahita.
Ny fiaraha-manala fahanginana amin'ny alina dia efa niova hoe "tsy misy fiaretan-tory" azo heverina fa noho ny antony tsy fandriam-pahalemana no nahatonga io.
Misy kosa anefa ireo fombafomba tena mbola voatahiry tamin'ny fanaladiana. Ao ohatra ny anaram-bola izay atolotra rehefa mamangy manjo. Ao ny drafitry ny kabary amin'ny famangiana manjo amin'ny ankapobeny. Raha te hahafantatra ireo anaram-bola atolotra amin'ny famangiana manjo ianao dia aza misalasala manoratra aty amiko fa atolotro anao an-kafaliana tokoa izany. Ity ny takelaka hifanoratana.
Izany indray aloha ny lava, izay ny fohy fa andeha hiaraha-mijery ity ohatra kabary famangiana manjo ity.
Rehefa tonga eo alatrano dia matetika milahatra mamangy. Ka rehefa tonga amin'ny anjaranao izany dia mandroso ao an-trano ianao sy ireo olona miara-mamangy aminao. Tsy avy hatrany dia miteny fa mijoro segondra vitsy eo anoloan'ny nofomangatsiakan'ilay maty aloha, vita izany vao mitodika hanatrika ireo fianakaviana hovangiana. Ity àry ny ohatra azonao ampiasaina amin'izany.
Mpamangy: Manakory aby izato ianareo tompoko
Vangiana: Indreto ratsy eto ihany tompoko.
M: Mamangy amin'ny fahoriana tompoko.*
M: Manoloana izao raho-mitatao amin'ny fianakaviana izao tompoko, dia indreto izahay (namana, mpiara-miasa, mpiara-monina) mijoro manoloana anareo hitondra ny teny fampihononana. Mafy tokoa izany hoe nilaozan'ny ray izany, folaka andry niankinana ny fianakaviana, rava fefy mpiaro amin'ny rivotra, toro vato nandiavana. Ny lehibe nilaozam-bady, ny zaza nilaozan-dray, mafy tokoa ny fahoriana ka izany no antony hijoroanay hanao maso sy orona ka iray alahelo, fa isika izao tokoa no toy ny sarom-bilany ka iray mihodidina ihany ary toy ny tanan-kavia sy havanana ka izay didi-maharary. Kanefa mahaiza mionona tompoko fa tombon-dalana ny azy fa isika rehetra samy mbola ho antsoin'ny Ray avokoa. Mitrakà fa zara hetra tsy maintsy efain-draolombelona ny fahafatesana kanefa mino isika fa ny fahafatesana toy izao no hahitana ilay fiainana mandrakizay.
V: Tohina tokoa ny fo ary vahotra ny vava, ila tsy hahaloa-peo raha mandalo izao ora mangidy izao. Mangidy hoy aho kanefa zakaina amim-pinoana tokoa. Misaotra anareo izahay tonga nidodododo, tonga mankahery. Tsy nataonareo sira latsaka an-drano izahay mianakavy ary tsy navelanareo hitondra irery izao fahoriana izao fa tonga kosa ianareo nanatanteraka ny voalazan'ny soratra masina manao hoe: miaraha ory amin'izay ory, mifampitondrà izay mavesatra. Mahatsapa tokoa izahay ankehitriny fa lehibe aminareo ny hasim-pihavanana ary manan-danja loatra aminareo ny fanehoana firaisan-kina indrindra amin'ny andro maloka toa itony. Ho aiza tokoa moa ireo nidonam-pahoriana? Raha tsy teo ianareo, tsy maintsy nionona izahay, mainka moa fa ijoroanareo maro toa izao, maivamaivana ny fahoriana tompoko ka dia isaorana eram-po sy eram-panahy ny fihetsika ataonareo.
M: Aza misosok'alahelo intsony tompoko
V: Misaotra tompoko
Instant Malagasy - Site pour faire un blog gratuit - Eklablog - CGU - Signaler un abus -